Shina kaolinina mpanamboatra sy mpanamboatra Soavaly tsiroaroa
Very ny fandrehitra,%
Indostrian'ny taratasy: ny ranomainty kaolin vita amin'ny kolazy dia misy fitrohana tsara sy taham-piafenana avo, izay afaka manolo ny diôdiômanôzy titanium lafo vidy. Izy io dia mety indrindra ho an'ny mpametaka elatra haingam-pandeha. Ny kaolin vita amin'ny calcined ho filler dia afaka manatsara ny fanoratana sy ny fanontana ny taratasy koa, ary hampitombo ny taratasy. Ny fahamendrehana, ny malama ary ny famirapiratan'ny taratasy dia afaka manatsara ny fahamendrehana, ny hafanan'ny rivotra, ny fahalalahana, ny fanontana ary ny fanoratana ny taratasy, ary mampihena ny vidiny.
Indostrian'ny firakotra: ny fampiasana kaolin vita amin'ny kalitaona ao amin'ny indostrana fanosotra dia afaka mampihena ny habetsaky ny diôdiôma titanium, mahatonga ny sarimihetsika sarimihetsika hanana toetra tsara, ary manatsara ny fanodinana, ny fitehirizana ary ny toetran'ny fampiharana amin'ny firakotra. Ny habetsaky ny kaolin vita amin'ny kolazy ampiasaina amin'ny firakotra antonony sy avo lenta dia 10-30%, ary ny kaolin vita amin'ny kaline ampiasaina dia 70-90% amin'ny votoatiny -2um
Indostrian'ny plastika: amin'ny plastika injeniera sy plastika ankapobeny, ny habetsaky ny kaolin vita amin'ny kaline dia 20-40%, izay ampiasaina ho toy ny mpameno sy mpanamafisana. Ny kaolin calcined dia ampiasaina amin'ny tariby PVC hanatsarana ny toetran'ny elektrika amin'ny plastika.
Indostria fingotra: ny indostrian'ny fingotra dia mampiasa kaolin be dia be, ary ny tahan'ny famenoana ny refy dia 15 ka hatramin'ny 20%. Ny kaolin vita kalisa (ao anatin'izany ny fanovan'ny tany) dia afaka manolo ny karbaona mainty sy ny karbaona fotsy hamokatra vokatra vita amin'ny kodiarana, kodiarana, sns.
Previous: Green Oxygène vy
Manaraka: Nanasa Kaolin
Calcined Clay Kaolin
Calcined Kaolin ho an'ny refractories
Kaolin misy kalisa fotsy